Maxaa Keenay Sadexdan Qodob Inay U Noqdaan Wadadii Uu N’Golo Kante Uga Tagi Lahaa Kooxda Chelsea? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Maxaa Keenay Sadexdan Qodob Inay u Noqdaan Wadadii Uu N’Golo Kante Uga Tagi Lahaa Kooxda Chelsea?
Inyar kaddib markii la guddoonsiiyey abaal-marinta PFA ee xiddiga ugu fiican gudaha waddanka Ingiriiska xilki ciyaareedkii 2016/17, N’Golo Kante waxa uu mar kale horyaalka Premier League kula guuleystay Chelsea, isaga oo noqday laacibkii ugu horreeyey ee laba horyaal oo isku xigta la qaatay laba kooxood oo kala duwan, intii ka dambaysay Eric Cantona oo taariikhdaas iska haystay.
£32 milyan oo Gini oo N’Golo Kante ay Chelsea kasoo bixisay markii ay kasoo qaadanaysay Leicester City, waxay horseedeen sannado qosol iyo farxad leh iyo bandhig ay jamaahiirta Blues ugu faanaan dhigooda kale oo uu ku muujiyey garoomada.
Koritaanka kubbadeed ee Kante, waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah sheekooyinkii ugu cajiibsanaa ee tobankii sannadood ee ugu dambeeyey soo maray dunida ciyaaraha. Waxa sheekooyinkii nololeed ee gaarka ah sii qurxiyey, labada koob ee Premier League ee isku xiga oo uu sii raacdsaday Koob Adduun oo uu udub-dhexaad ugu noqday Faransiiska in sannadkii 2018 ay 20 sannadood kaddib hantiyaan Koobka Adduunka oo ay ugu dambaysay 1998 oo Zidane uu halyeygii horseedka ugu ahaa xilligaas.
Dhacdooyinka layaabka leh, waxa iyaguna ka mid ah in Koobkii Adduunka ee 2014 uu ahaa mid aanay cidina aqoonin oo ka ciyaara heerka labaad ee Faransiiska, balse mar kaliya ay qaab-ciyaareedkiisa lagu tilmaamo Claude Mekelele cusub uu ku qabsaday dunida, taas oo ay u dheertahay ixtiraam, edeb iyo xishood aanay jirin cid ay iskaga mid yihiin oo garoomada lagu arkay.
Intii uu joogay Stamford Bridge, Kante waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda lama-taabtaanka ah ee aanay cidina ku hammiyi karin inay booskiisa dhexlaan, laakiin hadda waxa muuqanaya astaamo ku riixaya in Chelsea ay go’aan adag ka qaadato mustaqbalkiisa oo ay iska iibiso marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaaga.
Saddex sababood ayay khubrada ciyaaruhu soo bandhigeen oo Blues ku cadaadin doona inay ugu dambayntii suuqa dhigto halgamaaga N’Golo Kante, kuwaas oo laba ka mid ah ay la xidhiidhaan bandhiggiisa iyo midda saddexaad oo ah qiimaha waqtiga.
1:- Dhaawacyadiisa oo batay?
“Afar sannadood ayuu si joogto ah u ciyaarayay, laakiin dhaawacii kasoo gaadhay finalkii Europa League ayaa saameeyey ciyaarihii saaxiib-tinimo ee ka hor bilowga xili ciyaareedka. Fasaxa caalamiga ah ayaa u wanaagsanaa isaga si uu dhaawaca uga soo kabto. Qof kastana way u fiican tahay sababtoo ah, wuxuu ciyaarayay kulan kasta kaddib, kulanka xiga, kulanka sii xiga.” Sidaa waxa bishii August ee sannadkii hore yidhi Frank Lampard.
Nasiib-darro wax badan iskamay beddelin ciyaartoyga iyo tababarihiisa, waxaana mar kale kusoo laabtay dhaawacyo dibedda dhigay waqtiyo badan oo taariikhdiisana geliyey fasal-ciyaareedkii ugu dhaawaca badnaa. Tababarro badan iyo ciyaaro badan ayuu seegay, waxaanu maqnaa xataa xilligii ciyaaraha fasaxa loo geliyey xanuunka Coronaviurs. Dhaawaciisii ugu dambeeyey waxa uu soo gaadhay kaddib ciyaartii Manchester United ay guul-darrada u xambaarisay bishii February. Tani waxay keentay in isku-geyn ciyaaraha uu sannadkan u dheelay Blues ay noqdaan 22 kulan oo kaliya, waana heerkiisii ugu xumaa tan iyo sannadkii 2012.
Sida uu Lampard sheegay, dhaawacyo Kante waxa suurtogal ah inay qayb weyn ku leeyihiin ciyaaraha badan ee xili ciyaareed kasta uu dheelo oo celcelis ahaan kor u dhaafaya 50 kulan, taana waxa sababtay muhiimadda uu u leeyahay kooxdiisa iyo xulka qarankiisaba oo xattaa ka dalbaday inuu ciyaaro xilliyo uu dhaawac ahaa. Xili ciyaareedkii 2018/19 finalkii UEFA Europa League ayaa tusaale u ah in la dhaawac ciyaarsiiyo, waxaana ciyaartaas uu tababare Maurizio Sarri khadka dhexe dhigay oo ciyaarta uu dhamaystay isaga oo dhaawac ah.
Hadda, 29 jirkan waxa is-dhintay awooddiisii orodka iyo tamarta, waxaana muuqata in aanu ahayn laacibkii aan daqiiqadda kaliya istaagaynin afartii sannadood ee ugu dambeeyey ee xirfaddiisuna layaabka ku ridaysay dadka.
Arrintani waxay Chelsea ku riixi karaysaa inay iska iibiyaan N’Golo Kante maadaama aanay hubin sida uu noqon doono xili ciyaareedka dambe oo hoos-u-dhac kale oo uu kusii jiraa uu sababi doono in sida ay hadda Chelsea hoos ugu dhacday markii uu dhaawaca ka noqday, ay sidaas oo kale dhulka usii galaan. Si taas ay uga hor tagaanna ay tahay inay suuqa u galaan beddelkiisa.
2. Nidaamka ciyaareed ee Frank Lampard oo aanu ku habboonayn?
Waa halkee booska ugu wanaagsan ee N’Golo Kante ka ciyaaro? – Dadka qaarkood waxay ku andacoodaan in sida ugu fiican ee N’Golo Kante uu kusoo bandhigi karo ciyaartiisa ugu sarraysa ay tahay marka laba ciyaartoy ay khadka dhexe ka ciyaarayaan oo uu jiro mid kale oo ay iskaashadaan. Nidaamkan waa midkii uu isticmaali jiray Claudio Raniei iyo Antonio Conte waqtigiisii Blues. Dad kale ayaa iyaguna rumaysan in marka saddex khadka dhexe ah lagu ciyaarayo ay tahay sidii uu Kante ku helay bandhiggiisa ugu sarraysa oo isagu uu noqdo kubbad-sameeye hore u dhaqaaqa marna dib u noqda.
Dood saddexaad ayaa jirta oo ah Kante bandhiggiisa ugu fiican uu yahay marka uu u dhexeeyo laba ciyaartoy oo kale oo dhexda kala ciyaaraya, taas oo ah sidii uu xulka qaranka France ugu ciyaaray sannadkii Koobkii Adduunka.
Si kasta oo qaabka N’Golo Kante kusoo baxayaba, waxa aan dhegaysanin Maurizio Sarri iyo Frank Lampard oo go’aansaday in khadka dhexe uu noqdo saddex ciyaartoy oo booska difaaca horteeda ee kubbad-samaynta iyo caawinta difaacaba uu iska yeeshay Jorginho. Waxaana ka horreeya Mateo Kovacic ama Mason Mount oo mararka qaarkood khadka dhexe ka dhiga afar ciyaartoy.
Xili ciyaareedkan, Lampard ayaa go’aamo qaatay kulamada qaarkood uu ku fadhiisiyey Kante isaga oo ka doorbiday Jorginho, Kavacic iyo Mount, waana astaan muujinaysa in ciyaartiisa aan lala dhacsanayn.
Macallinkii ka horreeyey ayaa marar badan lagu eedeeyey in N’Golo Kante aanu ka ciyaarsinin booskiisii saxda, sidiina waxa raacay Lampard, waana sabab muujinaysa in N’Golo Kante aanu ku habboonayn qaab-ciyaareedka Lampard uu ka dhaxlay Sarri.
3. Waa waqtigii ugu habboonaa ee la iibin lahaa?
Go’aankii ugu wanaagsanaa ee suuqa iibka ayay Chelsea qaadatay markii ay sannadkii 2016 N’Golo Kante kasoo bixisay £32 milyan ee ay kasoo qaadatay Leicester City. Waxay faa’iidadiisa ku heshay gudaha garoonka iyo dibeddiisaba, laakiin hadda ayay tahay inay qaadato go’aan kale oo sax ah oo ay ku iibinayso ciyaartoygan.
Khubarada ciyaaraha ayaa ku doodaya, in haddiiba Chelsea in uun niyaddeeda ku jiro ay xilligan tahay waqtigii ugu habboonaa ee la iibin lahaa kubbad-dhise ahna kubbad-dilahan 29 jirka ah.
Iibsiga iyo gadista ciyaartoygu, waxay u baahan yihiin in waqtiga ugu habboon loo dhaqaaqo, haddii kale, waxa dhacaysa in khasaare lagu galo oo qiimihiisu uu dhaco. Waxa tusaale inoogu filan kooxaha sida Liverpool, Juventus iyo Bayern Munich oo ah kuwa sida ugu wanaagsan sannadihii ugu dambeeyey uga faa’iidaysanayay suuqa iibka ciyaartoyga. Chelsea waa inay raacdo dariiqooda oo kale oo ay xili ciyaareedyada soo aaddan ku hawl-gasho qaabkooda oo kale, waqtiganna ay u dhaqaaqdo inay suuqa dhigto Kante.
N’Golo waxa waqtigan qiimihiisu taagan yahay 100 milyan oo Euro sida ay shabakadda suuqa iyo qiimtaynta ciyaartoyda ee transfermarkt sheegtay, waxaanu taagan yaahy lacagtii ugu badnayd ee ay Blues ka heli lahayd hadda, balse haddii ay ka habsaanto waxa dhici doonta in qiimihiisu si aan la qiyaasi karin dhulka u galo.
Bixitaankiisu waxa kale oo uu faa’iido u noqonayaa ciyaartoyda da’da yar ee kulliyadda kasoo baxay sida Ethan Ampadu oo amaah ku maqan, Conor Gallagher iyo Billy Gilmour halka Mason Mount uu haddaba boos joogto ah cidhiidhsanayo.
Faa’iidada kale ee uu leeyahay waxay tahay in Chelsea ay lacagtiisa uga faa’iidaysato inay kusoo qaadato xiddigaha lala xidhiidhinayo ee Sergej Milinkovic-Savic iyo Boubakary Soumare.
Saddexdan sababood, ayaa khubrada ciyaaraha iyo warbaahinta Ingiriisku tilmaameen inay yihiin sababo dhab ah oo waaqaca ka duulaya oo Chelsea ku qasbaya inay iibiso madaalaheedan.
Waa Maxay Sababtii Albaabada Loogu Xidhay Qolkii Warbaahinta Kooxda Real Madrid?